Ithegi: intlalontle | Martech Zone
Namhlanje bendinosuku olumnandi kunye neqela lewebhu kuluhlu luka-Angie. Uluhlu luka-Angie luphuhlise indawo yabo ukuba ibe lilayibrari yobutyebi engakholelekiyo ... kwaye ngalo lonke elixesha baqhubekile bekhawulezisa indawo yabo. Amaphepha abo alayisha ngesantya esingaboniyo. Ukuba awundikholelwa, vela eli phepha kwiiGaraji zeGaraji. Eli phepha libandakanya imifanekiso, ividiyo, kunye namaqhosha entlalontle… kwaye isalayisha kwimillisecond. Ukuthelekisa indawo yabo kunye neyam kufana nokubaleka